Hidha Haaromsa Itoophiyaa: ''Osoo qabeenya bishaanii qabnuu kadhachuun nu nuffisiiseera''-MM Abiy - BBC News Afaan Oromoo
Hidha Haaromsa Itoophiyaa: ''Osoo qabeenya bishaanii qabnuu kadhachuun nu nuffisiiseera''-MM Abiy
Gaaffii miseensota paarlamaarraa dhiyfaateef deebii yeroo kennanitti boodatti harkifachuun pirojektii kanaa biyyattii baasii hin malleef saaxilaa jira jedhan ministirri muummee Itoophiyaa.
Piroojektiin kun yoo xumuramu akka Afriikaatti hidhaa human ibsaa maddisiisu isa guddaa ta'a. Ijaarsi pirojektichaa bara 2011 ture kan eegalame.
"Kadhachuun nu nuffisiiseera. Fedhiin guddinaaf qabnu biyyoota biroo kaayyoo miidhuu qabaachuu jechuu miti," jechuun Burqaan Oduu Itoophiyaa dubbii MM Abiy paarlaamaarratti kaleessa dubbatan gabaaseera.
Hidhaan Haaromsaa Itoophiyaa kun hariiroon dippilomaasii Masiriifi Sudaan waliin qabnu akka hammaatuuf pirojektii uumame miti.
'Ibsi Ameerikaan Hidha Guddicha Itoophiyaarratti baafte loogii qaba'
Osoo ummanni biyyattii harki caalaan ibsaa dhabanii dukkana keessa jiraataa jiraniifi hawwan Itopphiyaa ammallee jaarraa 21ffaa keessa qoraan cabsanii dugdatti osoo baataa jiranii qabeenya kanatti akka hin fayyadamne wanti taasisuuf hin jiraatu jedhan MM Abiy.
Masiriin garuu Itoophiyaan biyyoota sadan gidduutti waliigalteerra osoo hin gahamiin Hidhaa Haaromsaa kana bishaaniin hin guutne barbaaddi.
Akka maddeen Ministeera Dhimma Alaa Itoophiyaa jedhanitti biyoonni sadeen Kibtaxa har'aa maree addaan citetti deebiyu jedhamee eegama. Haata'u malee, qabxiiwwan marii maal ta'uu akka malan wanti ibsame hin jiru.
Marii kana irratti Afrikaan Kibbaafi Komishiniin Awurooppaa maree kanarratti akka argaman miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru.
Bitootessa keessa, Itoophiyaan marii jaarsummaa Ameerikaatiin gaggeeffamu keessaa ba'uun ishee ni yaadatama.
Itoophiyaan US marii sadarkaa taajjabbiidhaan seente gidduu galuudhaan osoo waliigaltee tokkorra hin gahiin pirojektii sana bishaaniin guutuun hin ta'u jechuun yaada kennuusheetiif himatteetti.
Gadduu Andaargaachoo: Ibsi Ameerikaan Hidha Guddicha Haaromsa Itoophiyaarratti baafte loogii qaba
1 Bitooteessa 2020
Itoophiyaa fi Sudaan magaalaa Finfinneetti marii siyaasaa ol-aanaa jedhame gaggeessaa jiru
17 Caamsaa 2020